Lucky Leprechaun wuxuu ku salaysan yahay a theme kaftan Irish. Leprechaun waa cirfiid ah Irish yaa xirtaa joog cagaaran iyo koofiyad, iska socdaa kabo suunka iyo sharaabaad stripy la gadhka sinjibiil ah. Astaanta duurjoogta ah waxaa sidaas ku habboonayn in la yiraahdo Lucky Leprechaun in this dhigeeysa free casino ciyaarta. Ma aha Intaa waxaa aad u fiican in ay soo diyaariyeen reer binu kulan Microgaming suuqa casino soo socda, laakiin waxaa la ogsoon yahay in ay kooda ah mid fudud oo raaxo ah dhigeeysa free casino kulan in ay qayb ka noqon.
Systems Microgaming Software Ltd. ku salaysan yahay ee Isle of Man. Waxa ay ku bilaabatay horumarinta kulan casino software sannaddiisii 1994. Raadinta at jawaab ciyaaryahanka, horumarinta Microgaming waxaa had iyo jeer ku dhiirri-galiyay in ay isku dayaan gacmahooda on noocyo kala duwan oo kulan casino la looks kala duwan iyo dareenka. Microgaming has also supplied brilliant poker and bingo game software to worldwide gaming brands.
The dhigeeysa free casino background ciyaarta Afyare waa ku cagaar midabka, la soo diyaariyeen ah ee midabo on duntu ku, Leprechaun ku factahay taagan dheer bidixda ee duntu ku, isagoo intaa ku daray taabashada kaftan ah ciyaarta. badanaa Waxaad maqli kartaa codka xylophone ee asalka ah la siiyo iska dareen sixir ah halka ciyaaro.
The dhigeeysa free casino Afyare shan iyo soddon duntu paylines. ciyaaryahan A suurto gal ah inaad doorato inuu u ciyaaro paylines yar. fursadaha jira ee la ciyaari doonto 1, 5, 10, 15, 20, 25 ama dhammaan 30 paylines. In la bilaabo ciyaarta, ciyaaryahanka uu u baahan yahay in la doorto qiimaha shilinka iyo lacagta bet ku, isku darka ah oo go'aan ka gaari doona saamiga guud ee line play kasta. Waxaad maqli kartaa codka foorida soo socda haddii aadan miiqdaan degdeg ku filan.
Ciyaarta ma laha calaamado weyn badan kuwa dhexdhexaadka ahayn duurjoogta ah iyo calaamadaha gunno ah. Majorly, calaamadaha oo dhan waa calaamadaha kaararka ciyaaraha, 10-iyada oo-ka-Ace. Kale oo kuwan ka, waxaa jira tuubooyinka, raacday ee Guinness, iyo calaamadaha violin.
Wild waxaa wakiil ka ah Lucky Leprechaun logo iyo this bedeli karaa oo dhan calaamado kale, marka laga reebo dheryihii oo dahab ah, taas oo ah calaamad Bonus iyo calaamad firdhin taas oo dhir afar-caleen si ay u sameeyaan isku-dar ah ku guuleystay on duntu ku. Lucky Leprechaun sidoo kale waxa uu Trail ah o 'Bonus Fortune. mid ku guuleysan karaa in ay 1,000x of bet ku Trail o ah 'bonus Fortune oo laga heli karaa by garaacid saddex ama in ka badan oo dheryay ku calaamadaha Bonus dahab ah
The wilds iyo abaalmarinta dhigeeysa free xaddi hufan in ciyaartoyda laakiin Trail ah o 'Fortune waa kara qurxiyey sasabaya ciyaaryahanka ciyaarta. Kuwani kulan fudud sida Lucky Leprechaun waxaa ka doorteen aqlabiyad fiican ee ciyaartoyda for nasashada iyo madadaalo ah dhigeeysa free casino waayo-aragnimo ciyaaraha in ay bixiyaan.
Gunooyin UK Casino Awards – Coinfalls Online £ 5…